खुसी कसरी हुने ? यस्ता छन् सकारात्मक मनाेविज्ञान खोजकर्ताका ४ टिप्स
तपाई जीवनमा कति खुसी हुनुहुन्छ ? हरेक व्यक्ति जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अाफूले अाफैंलार्इ प्रश्न गर्दछ । तपार्इ अहिले याे प्रश्नकाे उत्तर अाफूमा नै खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग तपार्इलार्इ केही सुझाव छन् ।
सबैको जीवनको दाैडले रफ्तार लिँदै जाँदा एउटा यस्तो समय आउँछ, त्यतिबेला फुर्सद कहिल्यै नहुने, सधैं हतार र भोलिदेखि त म काम गर्छु, आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्छु भन्ने संकल्प गर्दछाैं । नयाँ काम, नयाँ घर, नयाँ साथीभाई भए जिन्दगी हासीखुशी बित्ला त !
तर, वास्तवमा नयाँ जिम्मेवारी थपिदा खुशी भन्दा तनाव नै झन्-झन् थपिने हो । काम र तनाव बढ्दै जादाँ हामी धेरै जसोले साथीभाईका लागि छुट्याएको समय, परिवारसँग हाँसखेल गर्ने १५-२० मिनेटको समय पनि काम गर्न र तनावसँग दिमाग खियाएर, चिन्ता लिएरै बिताई दिन्छौं ।
सकारात्मक मनोविज्ञान (Positive Psychology) को अनुसान्धानले याे सही तरिका नभएकाे प्रमाणित भएको छ । यदि तपाई पनि यी विविध संघर्ष-कष्टको बीचमा आफ्नो र आफ्ना सन्ततिहरुको सफलता र खुशीकै निम्ति बाँचेको छु भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने सकारात्मक मनोविज्ञान त्यस्ता सकारात्मक दृष्टिकोण बोकेका व्यक्तिहरुका लागि केहि विज्ञानले प्रमाणित गरेका सुझाव प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
सकारात्मक मनोविज्ञानको मान्यता छ कि खुशी र उन्नति भनेकै स-साना राम्रा बानी बसाल्ने हो । यी स-साना बानीलाई जोडेर जीवन यतिसम्म परिवर्तन हुन सक्छ कि आफ्नो जीवनको परिभाषा हामी आफैं झन् सुन्दर बनाउदै जान्छौं ।
अध्ययनले के प्रमाणित गरेको छ भने अध्यनहरुले बताएका छन् कि सकारात्मक दृष्टिकोण र प्रगतिउन्मुख सोचले हाम्रो कामको उत्पादकत्व क्षमता ३१ प्रतिशतले बढाउँछ । तपार्इकाे पद वा जागिरमा बढुवाको सम्भावना ४० प्रतिशतले बढाउँछ र तनावको भावमा २३ प्रतिशतको कमी हुन जान्छ ।
शेयर बजारकाे लाभांश पछ्याउन केहि बेर छोड्दिनुस् । कृतज्ञता बढाउने, समाधानमा केन्द्रीत रहने, आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण काममा लगाउने समय निकाल्नुस्, पक्कै पनि तपाईले प्राप्त गर्ने लाभांश बढ्नेछ ।
एक वैवाहिक जोडीको उदाहरण सुनौं । यदि हरेक रात सुत्नुअघि आफ्नो छोरा-छोरीलाई अँगालो हालेर, माया व्यक्त गर्ने अनि एक श्रीमानले श्रीमतीलाई उसले दिनभरी गरेका केहि ३ कामका लागि धन्यवाद भनिदिए, श्रीमतीले पनि त्यस्तै गरिदिए, सकारात्मक ऊर्जा कसो नबढ्ला ? सबैको स्वास्थ्य, दिर्घायुमा छुट्टै पैसा र समय छुट्याउनु पर्दैन ।
खुशी, उन्नतिप्रगती र उत्पादकत्व बढाउँन यी ४ उपाय मध्य कुनै १ उपाय २१ दिन लगातार दोहोर्याउनुहोस् अनि फरक महसुस गर्नुहाेस्, हरेक दिन एक मिनेट समय यो अभियानलार्इ छुट्याए पुग्छ ।
१ थप ३ पटक मुस्कुराउने
हरेक दिन, आफ्नो दैनिकीमा थप ३ पटक मुस्कुराउनुहाेस् । अभ्यास सारै सजिलो छ र यसको प्रतिफल निकै गहिरो पनि छ । एक छोटो मुसुक्क दिएको हाँसोले हाम्रो मस्तिष्कमा संकेत दि हाल्छ कि तपाई एक खुसी र सुखी प्राणी हो । जस्तै आफ्नो अफिस जादाँ अथवा केटाकेटीलाई स्कुल पुर्याउन जादाँ, कतिपय अनुहार सधैं देखिन्छन । सधैं एकै समय, एकै स्थान तर्फ लम्कने ती अनुहार देख्दा बिना केहि सोचेसम्झे, हाम्रो ओठ आफै तन्किन्छ- मुस्कुराउँछ । यो प्रकृतिको एक शक्तिशाली बरदान हो । जसले आजको आधुनिक भाषामा भन्नु पर्दा हाम्रो सम्बन्ध (नेटवर्क र रिलेसन) आफैं बढाउँछ । मुस्कानको अभ्यासले सामाजिक सहयोग र सुरक्षाको भाव पनि बलियो बनाउँछ । यसलार्इ तपार्इ नियमित योग अभ्यासको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ । अनि फेरि अर्को रमाईलो कुरा, मुस्कान एक सरुवा रोग हो । रुघा खोकी जस्तै छिटो अरुलाई सरिहाल्छ ।
अब मात्र ३ पटक मुस्कान जबरजस्त केहि दिन थप्ने प्रयास गरौं त । बरु राति राति केटाकेटीलाई न्यास्रो हुने गरी नेटवर्क र रिलेसन बनाउँन कक्टेल पार्टी जान कम गरे हुन्छ ।
२) धन्यवाद भन्ने र धन्य महसुस गर्ने
हरेक दिन ३ वटा यस्ता कुराहरु आफू स्वयमले आफ्नो स्वर सुन्ने गरि हरेक दिन एक जनालाई धन्यवाद व्यक्त गरौं । सरल र सहज कुराहरुमा जस्तै- ‘धन्यवाद, एक कप चियाका लागि’, ‘धन्यवाद, आजको उज्यालो घामलाई’ । हो, यो अभ्यास पनि २१ दिन लगातार गर्ने हो । यसमा, एउटा नियम छ । हरेक दिनका ३ वटा नदोहोरिएका अर्थात नयाँ वाक्य हुनुपर्छ ।
यो अभ्यासले के गर्छ भने, हाम्रो मस्तिष्कलाई सकारात्मक बनाउदै जान्छ । सकारत्मक प्रकृति अपनाएपछि, मस्तिष्क आफैं अग्रिम ढंगले काम गर्न थाल्छ । यो भनेको कम्प्युटर प्रोग्रामिङको कोड (code) जस्तै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । एक पटक सहि कोड फिट गरेपछि, मस्तिष्कको कार्यक्रम (application) निरन्तर चलिरहन्छ, ढुक्क भए हुन्छ ।
३) आफू भित्रको सकरात्मक सोच फैलाउने
तेस्रो अभ्यास, हरेक दिन ३ जना फरक साथी वा कोहि पनि चिनजानको व्यक्तिको उहाँ कै अगाडि प्रशंसा गर्नुहोस् । जस्तै: ‘तपाईको मुस्कान कस्तो राम्रो’, ‘अरुलाई सहयोग गर्ने तपाईको बानी मलाई मन पर्छ’, ‘तपाईले हरेक दिन मज्जाले पानी पिएको देख्दा मैले पनि यस्तै बानी सिकें ।’ तर याद राख्नुस्, यस अभ्यासले काम गर्नका लागि प्रशंसाका शब्द असलभावका साथ मनबाटै आएको हुनुपर्छ ।
यति २१ दिन गरेपछि हेर्नुस्, तपाईको जीवन, सोच, वरिपरीको वातावरणमा कति फरक आउँछ । जीवनको एक नयाँ अर्थ तपाईसामू पक्कै अाउँछ ।
४) आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने
अरुलाई सरप्राईज दिने, हरेक दिन कसै न कसैका लागि केहि राम्रो काम एक्कासी गरिदिने, कामबाट घर फर्कदा, कहिले काँहि फुर्सद हुदाँ घरमा तरकारी-फलफूल किनेर लैजाने, कोही सह-कर्मीका लागि चिया-कफी मगाई दिने, अरुलाई आफ्नो माेटरसार्इकल या स्कुटरमा लिफ्ट अफर गर्ने अादि । यस्ता कामले तपाईको समयमा कुनै हानी पुर्याउँदैन र अरुलाई खुसी पनि बनाउँछ ।
हाम्रो कथा अनलाइनबाट
प्रकाशित २३ भाद्र २0७५ , शनिबार | 2018-09-08 07:18:37